Ividiyo yokuzalwa kwesiphepho esivuthayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IVIDIYO: Ukuzalwa kwenkanyamba evuthayo
I-Los iziphepho zomlilo Kungabonakala njengezinto ezidalwe ngokwenziwa, kepha iqiniso ukuthi ziyizinto zemvelo. Iziphepho zomoya ziyamangalisa, kepha iziphepho zomlilo ... ziyamangalisa.
Ungathanda ukubona ukuzalwa kwesiphepho somlilo?
Iziphepho zomlilo zenzeka ngaphansi kwezimo ezithile, ngokuvamile lezo ezitholakala emlilweni wasendle. Umlilo ujikeleza ngasikhathi sinye njengoba ukhuphuka, wakhe ikholomu yomoya. Imvamisa ziphakathi kwamamitha ayi-10 kuye kwangama-50 ukuphakama, namamitha ambalwa ububanzi. Umoya ovunguzayo unamandla kakhulu, ngaphezu kuka-160km / h, ngakho ziyingozi kakhulu, ngoba zingabhubhisa nezihlahla ngaphezu kwamamitha ayi-10 ukuphakama.
Kuwo wonke umlando wakamuva kube neziphepho eziningana ezivuthayo eziye zabulala izinkulungwane zabantu. Isibonelo, iBombardment of Dresden (ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba) yakha eyodwa eyabhubhisa uhhafu wedolobha, ngaphezu kokubulala abantu abangaba yizinkulungwane ezingama-40. Isiphepho somlilo, njengoba sibona, yisimanga sokuthi kungalimaza kakhulu. Uma uhlangabezana neyodwa, into enhle kakhulu ongayenza ukuphela bese ubiza umnyango wezomlilo.
Kodwa-ke, lapho ufuna ukutadisha akukho okungcono kunokukwenza okukodwa emkhakheni bese uqopha okwenzeka ngokuhamba kancane, njengoba kwenza iThe Slow Mo Guys. Bakwenze ngokubuyisela inqubo ngendlela ye-rustic, ulayini abalandeli bezungeza ibhakede loketshezi oluvuthayo. Futhi imiphumela iye yaba emangalisayo.
Kancane kancane, kwakhiwa umsinga oyisiyingi, owavutha amalangabi futhi ... ngendaba yesikhashana esincane kakhulu, ikholomu yomlilo. Kuyathakazelisa, awucabangi?
Vele, uma unesibindi sokuzama, kwenze endaweni lapho ungakulawula khona, futhi njalo ugwema okusalungiswa okuqinile ukugwema ukucasuka.
Ubucabangani ngale vidiyo?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » IVIDIYO: Ukuzalwa kwenkanyamba evuthayo
Ukutshala imifino ... etundeni elibandayo lase-Alaska?